Soo dejisan YGS Virtual Piano 2010.05.07 – Vessoft
WindowsKuwa kaleWaxbarashoYGS Virtual Piano
YGS Virtual Piano – software ah oo lagu ciyaaro oo ku magac-MIDI-keyboard. YGS Virtual Piano Chords kuu oggolaanayaa in aad dooro chords ah kuwan raadkaygay audio kala duwan, astaysto qalab muusig by dhegta, go’aamiyo midab ah ee muusiga, muffle codadka kala duwan iwm software ayaa playbacks dhawaaqa furaha qalabka muusikada ama furaha xagga bidixda ka ah qalab muusiik by isticmaalaya keyboard kombiyuutarka. YGS Virtual Piano awood u tahay in la abuuro iyo badbaadin timbres badan oo ah qaab faylasha ku saleysan suurtagalka ah MIDI-synthesizer. YGS Virtual Piano ayaa interface fudud oo dareen leh.
Play on keyboard ee dalwaddii
Ka qabi karto ka mid ah qalabka ay dhegta
Doorashada Rogge faylasha audio
Kartida in la abuuro iyo badbaadin timbres
Soo dejisan YGS Virtual Piano
Faallo ku saabsan YGS Virtual Piano
YGS Virtual Piano Xirfadaha la xiriira